Imithi isitshalo Méntha piperíta (peppermint): inzuzo kanye nokulimala utshani
Impilo, Imithi engamakhambi
Ekwindla ezindaweni aseningizimu iqoqo asebenzayo iqala peppermint. Bebaningi abantu isiko linesizotha has eminyakeni engaphezu kuka-250 edlule. I ayelapha zalesi sihlahla kakhulu ayazise imithi esempumalanga nengxenye esentshonalanga. Ngekhulu xxi, ukusetshenziswa oluhlaza amaqabunga ngokunsomi sifanamsindvo akayikhohliwe.
Iyasebenza emikhulu e ukudla, eyenza imithi kanye nezimboni yezimonyo Peppermint. Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka zezitshalo ehlukile townsfolk abavamile kuhlale kuyimfihlakalo. Thola lolu lwazi ezibalulekile kuzokusiza athikili yethu.
Yeka simanga semvelo?
izinganekwane eziningi amahle nama-legends ezihlobene nale isitshalo, njengoba kufakazelwa imibhalo yasendulo. Ngokuphindaphindiwe mayelana izakhiwo Mint okukhulunywa ngabo eBhayibhelini. AbaseGibhithe lasendulo babesebenzisa lona ukuze nokugqumisa. Ezweni kukhona ezingaphezu kwekhulu zama-utshani zasendle. Kodwa ukutshala kwamasiko neyaziwayo izibambiso mayelana 35 zinhlobo, kuhlanganise peppermint (isithombe evezwa impahla).
indlela yayo esephetha yokufakelwa - bewela Kolosova aqueous kanye Mint. Lo mkhuba ukuthandwa global zalesi sihlahla itholakala izithako zako. amafutha abalulekile ezitholakele utshani, iqukethe ikhemikhali eyigugu - menthol. Inikeza nokuphola ukunambitheka ababayo kanye kunemiphumela eqeda ukuvuvukala.
flavonoid Found in ukwakheka kanye ukuthuthukisa permeability semithambo kanye kuyaqina, kanye banezimfanelo antioxidant futhi umsebenzi anticarcinogenic. Ngenxa yokuba khona tannins batshale anenhlaka udumo izakhiwo astringent. Amahlamvu abacebile acid organic, okuyinto enomthelela tonic, antispasmodic futhi immunomodulatory.
Amahlamvu kunezelwa ukudla neziphuzo, kanye ngibenze infusions zokwelapha Iziphungo ukuze basize ekuhleleni umsebenzi isimiso sezinzwa futhi wokugaya ukudla. Futhi ekugcineni, utshani ungumthombo amaminerali abalulekile namavithamini.
Peppermint, inzuzo kanye nokulimala is kahle zihlolwa odokotela, isetshenziswa ezihlukahlukene ezindaweni zokwelapha. It is ukungezwa okhilimu kanye yokugcoba, ezikhonjiswe ngoba esiqoshiwe ubuhlungu kanye migraine. Izidakamizwa dambisa izifo dermatological. izifundo eziningi olwenziwa ezingaphezu kweyodwa eyishumi, baye babonisa ukuthi imbiza ubukisa anti-umdlavuza umphumela.
I ucwaningo yayiqhutshelwa ezilwaneni yi kwaba emangalisa - Mint Kumiswe ukuthuthukiswa izimila ebulalayo ngcono isimo jikelele. ososayensi American udumo simila futhi sizole. It is wafakazela ukuthi ukusetshenziswa njalo itiye Mint ngcono ukugaya, kuvimbela ukubuyisa, ukuvuvukala, ukusinda kanye nobuhlungu esiswini.
Ngokusho kochwepheshe, amafutha abalulekile anezakhi mucolytic liquefies phlegm ne isikhwehlela display. Ukuhlikihla ke endaweni esifubeni, kungenzeka ukuqeda ukukhwehlela ngokushesha futhi unciphise umphimbo obuhlungu. iziphuzo Zezıhlabane okunenzuzo ukuba ingcindezi, normalizing ke, ngcono ukugeleza kwegazi futhi umzimba. Tea kuqinisa amasosha omzimba futhi ulawula umjikelezo wokuya esikhathini.
Ngaphezu kwalokho, Mint eshiya amathoni ezinhle, aqabule. Futhi ngibonga kule ongaphakeme ikhalori isiphuzo ingagxila ekudleni. Abelaphi belulekwa ukusebenzisa amafutha aromatherapy. pair Elimnandi ukuthuthukisa inkumbulo, ukuthuthukisa ukugxilisa ingqondo. nethonya elihle esimweni psycho-ngokomzwelo ka peppermint.
Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka ngoba amadoda: nemiphumela emzimbeni
Owesilisa labantu Mint kuletha izinzuzo fana njengoba esifazane. Nokho, kukhona umbono wokuthi ukusebenzisa kunciphisa potency lokulimaza zokuzala. Yini ongayisho ukuze lokho? Ngomqondo ebalulekile Ingxenye. Lokhu kusebenza futhi ukusetshenziswa infusions, Iziphungo kanye amalungiselelo equkethe peppermint. Hhayi ukuze uthole Chile negative, akudingekile ukwandisa umthamo. Ngokuvamile, umthelela omuhle empilweni peppermint zabesilisa. Izinzuzo kanye umonakalo zayo, kanye nanoma yikuphi isitshalo kuncike isicelo lesifanele.
Ukusebenzisa e Cosmetology
Ngokusho kochwepheshe eziningi, notshani zisebenzelana nesikhunta ukuthambisa futhi amafutha izakhiwo. Ngaphandle ukusetshenziswa amakhemikhali kungaba ngcono ukubukeka. Ukuze uqinise izinwele futhi ukuqeda amashampu dandruff ukwengeza amathonsi ezinhlanu amafutha abalulekile.
Qinisa futhi moisturize isikhumba kuzosiza khuhla. Indlela ukulungiselela: uhlanganise lukakhukhunathi uwoyela peppermint noshukela. Abakwazi ukukuthinta nasemilenzeni. Ukuze kulabo abaphethwe isikhumba oily, qiniseka ukuthenga lotions esekelwe amakhambi. Ukuzola, ukuqeda ukuqubuka futhi ngokweqile amafutha peppermint. I imbiza has umphumela elwa namagciwane, ubulala namagciwane abangela izifo futhi asihlanze ubuso.
Phakathi ukungabi khona nemfashini anti-ukuguga amathuluzi okhokho bethu wasebenzisa lesi sitshalo. Ukunikeza ukupheka buso ekuvuseleleni: uhlanganise fresh Mint amaqabunga (spoon esikhulu), chamomile omisiwe (5 g), amaqanda washaywa noju. Sebenzisa ebusweni imizuzu engu-15.
Menthol eziqukethwe Ukwakheka Mint, kunomthelela omubi inani ubisi lwebele - lactation encishisiwe. Thuka ukusetshenziswa izitshalo elandelayo ngesikhathi sokukhulelwa. Akubalulekile ukunikeza itiye nezingane kuya eminyakeni emihlanu. Ngemithamo emincane esimisiwe gipotonikam peppermint.
Umonakalo incike lemali kanye nokuvama ukusetshenziswa. Kuyinto engathandeki, njengoba kushiwo ngenhla, ukuhlukunyezwa peppermint iziphuzo amadoda ngoba ziqukethe izingxenye zibulale ukukhiqizwa kwe-testosterone.
Lungiselela itiye kufanele uzilungiselele kuphela ingilazi noma izitsha zobumba. Kungasetshenziswa njengoba amaqabunga omisiwe noma fresh. amagremu ayikhulu namashumi amathathu amanzi abilayo edingekayo nezinkezo ezimbili ezinkulu utshani. Kumele kube phisa ketshezi imizuzu emihlanu.
Excellent peppermint kuhlangene, izithombe zazo zingatholakala asendabeni, nge itiye elimnyama. Kuyinto elula - ukubeka ambalwa amaqabunga tea emaqabungeni utshani. Ukuze uthuthukise ukunambitheka, engeza lemon noju. Iziphuzo kujwayeleke ukugaya futhi sithuthukise peristalsis.
Izidakamizwa ukumnika ne izinkinga zesisu
Kusukela iqoqo olandelayo - 15 g Mint, wort iSt John sika, 60 g no 2 g trefoil amanzi - Thatha nezinkezo ezimbili ngxube phisa enkomishini yamanzi abilayo. Ukuze ubambe endaweni thermos amahora amabili, abe isiphuzo emini.
Njengoba sesibonile, anezakhi esiyingqayizivele Peppermint. Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka izitshalo akwenele. Kodwa uqaphele futhi baqaphe e uhlelo lwayo lokusebenza.
Uhlanza umzimba ocushiwe carbon: izinzuzo futhi efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka
Aralia Manchurian: yokusetshenziswa, intengo, ukubuyekezwa
Inhlanganisela Aloe noju uphulukisa izifo eziningi
Izidakamizwa "Bee celandine"
Nezimagqabhagqabha Chinese esiwohlozayo disc isifo: ngendlela kwesicelo, Izimo, ukubuyekezwa
Ukwelashwa Folk Medvedka: izifo, ikakhulukazi isicelo kanye nokubuyekeza
Izimfihlo Aristocrat, noma kanjani mhlophe isikhumba ebusweni nasemzimbeni
Indlela ukusindisa ngesithombe "Instagrama": izindlela eziyinhloko
Ikhekhe nge jam: funda ngezandla zabo ukwenza lolu hlobo of baking (izindlela ezine ukupheka)
Ubani ligcwaliswe Balda e Pushkin sika inganekwane "The Tale of umPristi futhi Thim yakhe Balda"?
Indlela esiphatha ngayo ngokufaka isihlabathi izinso indlela kazwelonke? iresiphi enemininingwane
Church of St kaJohane uMbhapathizi (Uglich): umlando, izakhiwo
Iseva Web ngokuhlola amawebhusayithi kanye zokusebenza
Modern classical abaqambi. Isebenza ngu bomculo wesimanje
Mincer Bosch MFW 68640 - imishini Amatebhe
Izidakamizwa yokucindezelwa ongaphakeme futhi kubangela ingcindezi ongaphakeme
Kanjani ukuthuthukisa ukucabanga okunengqondo e ingane ngokufundisa umculo